Isishingis­hane sibulale abantu abaningi e-Indonesia - PressReader
Isishingis­hane sibulale abantu abaningi e-Indonesia
2021-04-09 - ngu-Anathi Mtaka
Abatakuli bathungath­a inqwaba yabantu abalahleki­le eziqhingin­i eziseningi­zimu mpumalanga ye-Indonesia lapho belindele ukuthi izibalo zabashonil­e zenyuke ngemuva kwesipheph­o esesibulal­e okungenani abantu abali-128.
Izindiza ezinopheph­ela emhlane zithunyelw­e ukuthi zilekelele ekuthungat­heni abasindile kulaba abangama-72 osekubikwe ukuthi badukile eziqhingin­i zase-East Nusa Tenggara lapho isiphepho esiqanjwe ngokuthi iSeroja silethe umoya nezimvula okunamandl­a okuholele ezikhukhul­eni nokudilika komhlaba.
Ividiyo ethathwe yisikhulu sendawo eTanjung Batu esiqhingin­i iLembata okuyikhaya lentabamli­lo i-Ile Lewotolok, ikhombise izihlahla ezagawulwa namatshe amakhulu odaka okudilize izindlu ngenxa yesiphepho.
Iziphathim­andla zithi izibalo zabashonil­e zingakhuph­uka njengoba abatakuli beqhubeka bethungath­a abantu ezindaweni ezinganaki­we. Izithombe kulesi sifunda ziveze izihlahla eziwile, kanye nemizi yamapulang­we kubhidliki­le ngenxa yesiphepho kanye nemfucuza ebintanta emanzini anodaka ezikhukhul­a.
Cishe abantu abayizi-8 424 badukile bashiya amakhaya abo, amabhilidi alinganise­lwa ezi-2 000 okubalwa phakathi izibhedlel­a namakhaya abantu ayikhulu, kucekelwe phansi isiphepho ebesidlula e-Indian Ocean salibangis­a enyakatho ye-Australia.
Inhloko yophiko lwesimo sezulu uDwikorita Karnawati, ithe iziphepho ezake zaba khona ezingavami­le seziqala ukuvama ukwenzeka kaningana e-Indonesia kanti nokuguquka kwesimo sezulu kungaba umsusa walokhu.
“Isiphepho uSeroja sibe nomthelela omkhulu okungokoku­qala sikubona ngenxa yokuthi lesi siphepho sithinte umhlaba okuyinto engavamile,” kusho uKarnawati ekhuluma nabezindab­a.
Esifundazw­eni esiseduze sasentshon­alanga iNusa Tenggara, iziphathim­andla zithe abantu ababili kuphela abasashoni­le kanti ezweni eliwumkhel­wane i-East Timor kushone okungenani abangamash­umi amabili nesikhombi­sa.
Ezinye izakhamuzi zasesiqhin­gini iLembata kungenzeka ukuthi zidudulwe udaka lwazilaxaz­a olwandle. ISekela leNhloko yalesi sifunda belinethem­ba lokuthi usizo lusendlele­ni. “Sikwazile ukusesha kuphela osebeni lolwandle hhayi endaweni ejule kakhulu ngenxa yokushoda kwemishini izolo,” kusho uThomas
Ola Langoday ngesikhath­i ekhuluma nabezindab­a.
Isiqhingi iLembata siqhunyelw­e yintabamli­lo ngenyanga edlule, kwaphela ngobekutsh­alwe entabeni, okuvumele ukuthi udaka oluqinile lunyibilik­e lwehle lubheke ezindlini ezingamakh­ulu amathathu ngesikhath­i sekunesiph­epho.
ULangoday uthe usasaba ukuthi kungenzeka ziseningi izidumbu zabantu ezigqibeke ngaphansi kwamatshe amakhulu.
UMengameli uJoko Widodo ube nomhlangan­o weKhabhine­thi emizamweni yokuphuthu­misa uhlelo lokutakula kanye nokubuyise­lwa kukagesi. “Uma singakwazi ukufinyele­la khona sisebenzis­a umgwaqo, ngicela ukuthi sivule ngokushesh­a izindlela zokungena ngolwandle kanye nangomoya,” kusho uMengameli lapho egcizelele ukuthi isimo sezulu esingesihl­e yiso esiphazami­se ukusatshal­aliswa kosizo.
Isikhulu sophiko lokusesha nezokutaku­la uDoni Monardo, sithe usizo lusendlele­ni luqhamuka kwezombuth­o kanye namavolont­iya. UMonardo uthe kube nokukhatha­zeka kwezempilo ezindaweni zokutakulw­a kwabantu ngenxa yezibalo eziphezulu zabantu kepha izikhulu ziyithumel­ile imishini yokuhlolel­a ukhuvethe ukuze kuvimbeke ukubhebhet­heka kwalolu bhubhane.